मेरो श्रीमती जानकारी बिना घर छाडेर गइन्। हामी पुरुषका लागि कुनै न्यायलय छैन ?
Sun, Feb 25, 2018 | 21:06:51 NST
16:05 PM (7 months ago)
नाम ठेगाना नखुलाइएको
प्रश्नः म अहिले युएईमा छु। विवाहित हुँ। दुई वर्षको छोरा पनि छ। मेरो श्रीमतीले फोन गर्दा नउठाउने, एसएमएसको रिप्लाई पनि नगर्ने। पटक-पटक कोशिस गर्दा नभएपछि छुट्टि लिएर घर गएँ। समस्या के हो भनेर सोध्दा तपाईंसँग बस्न मन छैन भन्छ। बुवा काकाले गर्दा मसँग विवाह गरेको रे। विवाह भएको १५ दिनबाट यस्तो भएको हो। मैले यो समस्या परिवार र ससुरालीमा राखें। ससुरालीले मिल्नुपर्छ भनेर मिलाएर पठाउनु भो। तर फेरि त्यस्तै भयो। यसले गर्दा मलाई परदेशमा गाह्रो भइरहेको छ। हृदयघात होला जस्तो हुन्छ। यो समस्या समधानका लागि कुनै कानूनी उपचार छैन्? मेरो नानीको भविष्य भताभुङ्ग भो। हामी पुरुषका लागि कुनै न्यायलय छैन ? मेरो श्रीमतीले जानकारी बिना घर छोडेर गइन्। छोरा पनि लिएर गइन्। घरमा फोन गर्दा थाहा पाएँ कि मेरी श्रीमतीले सम्पतिको हकदावी र नानीको खर्चका लागि मासिक १५ हजार पाउँ भनेर मुद्धा हालेको रहेछ।
उत्तरः बुद्ध जी, तपाईंको समस्याबारे हामीले विभिन्न कानून व्यवसायीसँग जिज्ञासा राखेका थियौं। मूल समस्या तपाईको श्रीमती सन्तान सहित घर बाहिर बस्नु भएको रहेछ। तपाईंको श्रीमतिलाई खान लाउने ब्यवस्था नगरि घरबाट निकालेको हो भने उनी र बच्चाको खान लाउने खर्च भराउने दायीत्व तपाईंको परिवारको हुन्छ। यदि आफैँ घरबाट निक्ली गएको हो भने तपाईंलाई त्यस्तो खर्च भराउने दायीत्व छैन। तपाईंको सन्तान नाबालख रहेछ र आमाले म पाल्छु भनेको हो भने वहाँले नै पाल्न पाउने अधिकार छ यस्तोमा बच्चाको उचित स्याहार गर्ने दायीत्व आमाको हुन्छ। आमाले उचित स्याहार गर्न नसके बाबुले पाल्नु पर्छ। यदि वहाँले पाल्न नचाहेको हो भने आफ्नो बच्चालाई पाल्ने दायीत्व बाबुको हुन्छ। तर जस्ले पाले पनि आफ्नो आमा बाबुलाई भेट्ने अधिकार बालखको हुन्छ। तपाईंलाई श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अधिकार छ । त्यसका लागि अदालत जान सक्नु हुन्छ।
त्यागेको सारङगीमै फर्किए हिमालसागर चुचे ढुङ्गो उही टुङगो भने जस्तै हिमालसागर सारङ्गीकै संगतमा फर्किनुभयो । हिमाल छोडेर गएपनि बुवा र दाइको सारङ्गी बजाएर गाउँ गाउँसम्म गाउँदै हिँड्ने क्रम चलिरहेकै थियो । उहाँ पनि बुवा र दाईसँगै हिँड्न थाल्नुभयो ।
युएईबाट घरमा पैसा पठाउँदा छविलालले जिते १२ लाख आबुधाबीको अलजिमी मुसाफा मजदुर क्याम्प क्षेत्रबाट युएईको अल अहलिया एक्सचेन्ज मार्फत परिवारलाई पैसा पठाउँदा उहाँलाई उपहार स्वरुप १२ लाख रुपैयाँ बराबरको कार परेको हो ।
भाखा राख्यो डाँडै काट्यो, पासपोर्ट र १६ लाख कहिले पाउने ? ‘भाखा राख्यो डाँडै काट्यो, हामीले पासपोर्ट र १६ लाख कहिले पाउँछौं होला त ?,’ सिराहका मनिसप्रसाद गुप्ता प्रश्न गर्नुहुन्छ । युएई पठाउँछु भन्दै ठग्ने दलाल गुफर मिया फरार भएपछि मनिसजस्तै १८ जनाको प्रश्न यही छ ।
ओमानले भिजिट र एक्सप्रेस भिसा प्रक्रिया अनलाइनबाट गर्ने
फागुन १३ – ओमानले भिजिट र एक्सप्रेस भिसा प्रक्रिया अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था ल्याउने भएको छ ।
काम परिवर्तन गर्दा युएईमा प्रहरी रिपोर्ट नचाहिने
फागुन १३ – युएईमै काम गरिरहेका नेपालीसहित विदेशी कामदारले काम परिवर्तन गर्दा चारित्रिक प्रमाण पत्र (प्रहरी रिपोर्ट) नचाहिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी बारे जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया
फाल्गुण १३ – जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत सुरक्षित आप्रासन परियोजनाले सिन्धुपाल्चोकले जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
दक्षिण कोरिया र बेलायतमा कार्यरत दोलखाका युवाले गरे पीडितलाई सहयोग
दोलखा, फागुन १३ – दक्षिण कोरियामा कार्यरत दोलखाली युवाले जिल्लाका मिर्गौला र ब्लड क्यान्सरपीडितलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।